Axmed Madoobe oo Addis Ababa kula kulmay wasiirka arrimaha debadda Itoobiya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Addis Ababa – Mareeg.com: Hoggaamiyaha maamulka kumeel gaarka ah ee Jubba Axmed Maxamed Islan oo shalay booqasho ku tegay dalka Itoobiya ayaa maanta Addis Ababa kulan la qaatey Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalkaas Dr.Tedros Adhanom.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya ayaa sheegtay in kulanka labada masuul looga wada hadlay halka uu marayo iyo waxa ka dhaqan galay heshiiskii hoary Addis Ababa ugu dhexmaray dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Axmed Madoobe, kaasoo lagu soo afjaray khilaafkii Dowladda Federaalka iyo maamulka Jubba.
Heshiiskii Adisababa ayaa dhigaayey in dhamaadka Bisha Feberaayo 2014 Dekadda Kismaayo lagu wareejiyo masuuliyiin ay soo magacaabtey Dowladda Federaalku kaas oo aan dhaqan gelin, kadib markii maamulka Jubba ay sheegeen in waxyaabo badan oo ka horeeya arrintaas oo ay ahayd in Dowladdu ka soo baxdo aysan dhicin.
Dhawaan mas’uul ka tirsan maamulka Juba ayaa sheegay in dekedda Kismaayo la mid tahay dekedda Boosaaso oo aan wax dhaqaale ah kazoo gelin dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha debadda Itoobiya, Dr. Tedros Adhanom ayaa ahaa masuulkii ka soo shaqeeyey soo afjaridda khilaafkaas isla markaana goob joog ka ahaa.
Kulanka labada masuul ayaa imaanaya iyada oo Itoobiya ay xoojisey galaanka ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya kadib markii ay si toos ah uga mid noqotey Hawlgalka AMISOM, salkana dhigteen gobolada Galguduud, Hiiraan, Baay iyo Gedo.